ရွှေမြန်မာ တွေ တကယ် လိမ်ရင် … ပေါက်ဖော် တွေ ရူးသွား မယ်…ဆိုတဲ့ အကြောင်း သိစေချင် – Zartiman
ရွှေမြန်မာ တွေ တကယ် လိမ်ရင် … ပေါက်ဖော် တွေ ရူးသွား မယ်…ဆိုတဲ့ အကြောင်း သိစေချင်
ဖြစ်ချင်တော့….. မြွေပွေးမှာ …မျက်ပြူး နဲ့ မျက်မှေး ဆိုပြီး နှစ် မျိုး ရှိ တယ်.ဆိုပဲ။သိကြလားဗျ။.တရုတ်တွေ ဝယ်တာက မျက်မှေး အမျိုး အစား တဲ့ဗျ …ဖြစ်ပုံ က ဒီလို .. တရုတ်တွေ က… ကျုပ်တို့နိုင်ငံ မှာ ရှိတဲ့ မြွေပွေးေ တွ ကို..ဈေးကော င်းပေးပြီးဝယ် တာ ကြားဖူးမှာ ပေါ့… ဈေးကောင်းရ သတဲ့ေ ဟးး …ဆိုတာနဲ့ တို့နိုင်ငံက သကောင့်သားေ တွ က မြွေပွေး ဖြစ်ြ ပီးရော ဆိုပြီး သေးေ သးကြီး ကြီး အကုန် ဖမ်းပြီး မြွေပွဲစား ကတ ဆင့်ဟ တရုတ်ပြည် ကိုရောင်းကြသတဲ့..။
အဲဒီ မြွေပွေး မျက်မှေး က ..အဆိ ပ်သိပ် မပြင်းေ တာ့ ..သူတို့ ဟင်းချ က်ရောင်းရ တာ အဆင်ပြေတာ ကိုး… မျက်ပြူး ကတော့ ..အဆိပ် အရမ်းပြင်းလို့ တရုတ်ပြည် မှာ..ဘယ်သူမှ မစား ဘူးတဲ့.. အဲဒီမှာ ….ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြ သလဲ ဆိုတော့….. ရောင်းတဲ့ကော င်တွေက. .ပြူးပြူးေ မှးမှေး မြွေပွေးဖြစ်ပြီးရော..ဖမ်းရောင်း ကြ သလို မြွေ ပွဲစားကလဲ…ရသမျှ အကု န်သယ်ပြီး တရုတ်ပြည် သွားပို့တယ်..။ အဲ ဒီမှာ..ဝယ်လက် တရု တ် က မျက်ပြူးတွေ မဝယ်ဘူး လို့ပြောတော့ ..။
မြွေပွဲစား ဒုက္ခေ ရာက်ပြီလေ….မွဲတော့ မှာ ကိုး.. အဲဒီမှာ..မြွေပွဲစားက အကြံပေါ် လာတာနဲ့ ကားထဲကြေ မွပွေးမျက်ြ ပူးတွေ ကို..တစ် ကောင်ခြင်းယူပြီး..မျက်လုံး မှာ ပရုပ်ဆီ လိ မ်းပေး လိုက် သတဲ့…ဘယ်ေ လာက်ပြူး တဲ့ မျက်လုံးဖြ စ်နေနေ ပရုပ်ဆီ နဲ့တွေ့တော့ မှေး သွား ရတာပဲ ..။တရုတ် ဝယ်လ က် ဆီပြန်သွားပြီး .. ” ဟောဒီမှာ..တာကော လိုချင်တဲ့ မျက်မှေး တွေဆို ပြီး ရောင်းတော့.. စောင်တရုတ်က လဲ ဘုမသိဘမသိ နဲ့မြွေပွေး မျက်မှေးတွေ ဆိုပြီးငွေချေပေး လိုက်တာပေါ့… ။
ရက်နည်းန ည်းကြာ လို့ ..ပရုတ်ဆီဓာတ် ပျယ်သွား တဲ့မြွေပွေး တွေ ရဲ့ မျက်လုံးတွေ က…ပြူးပြူးလာ တိုင်း တရုတ် ရဲ့ မျက်လုံးပါ ပြူးပြူး လိုက်လာ သတဲ့…ငါဝယ်တဲ့ မျက်ေ မှးတွေ က..အခုဘာ လို့ြ ပူးလာ သလဲ ဆိုပြီးစ ဉ်းစားရင်း နဲ့ တရုတ် ကြီး ရေရွတ်လိုက် တာက တော… ” စောင် ပ ယိုးးးး ဘီမာသွေ ” တဲ့ … မလုပ်သေး လို့ပါနော်…မြန်မာတွေ … တီကယ် လိ မ်ရင်..တီရုတ် လည်း မခံနို င် ပါဘူး နော့ …..
ရှမွေနျမာ တှေ တကယျ လိမျရငျ … ပေါကျဖျော တှေ ရူးသှား မယျ…ဆိုတဲ့ အကွောငျး သိစခေငျြ
ဖွဈခငျြတော့….. မွှပှေေးမှာ …မကျြပွူး နဲ့ မကျြမှေး ဆိုပွီး နှဈ မြိုး ရှိ တယျ.ဆိုပဲ။သိကွလားဗြ။.တရုတျတှေ ဝယျတာက မကျြမှေး အမြိုး အစား တဲ့ဗြ …ဖွဈပုံ က ဒီလို .. တရုတျတှေ က… ကြုပျတို့နိုငျငံ မှာ ရှိတဲ့ မွှပှေေးေ တှ ကို..စြေးကော ငျးပေးပွီးဝယျ တာ ကွားဖူးမှာ ပေါ့… စြေးကောငျးရ သတဲ့ေ ဟးး …ဆိုတာနဲ့ တို့နိုငျငံက သကောငျ့သားေ တှ က မွှပှေေး ဖွဈွ ပီးရော ဆိုပွီး သေးေ သးကွီး ကွီး အကုနျ ဖမျးပွီး မွှပှေဲစား ကတ ဆငျ့ဟ တရုတျပွညျ ကိုရောငျးကွသတဲ့..။
အဲဒီ မွှပှေေး မကျြမှေး က ..အဆိ ပျသိပျ မပွငျးေ တာ့ ..သူတို့ ဟငျးခြ ကျရောငျးရ တာ အဆငျပွတော ကိုး… မကျြပွူး ကတော့ ..အဆိပျ အရမျးပွငျးလို့ တရုတျပွညျ မှာ..ဘယျသူမှ မစား ဘူးတဲ့.. အဲဒီမှာ ….ဘာတှေ ဆကျဖွဈကွ သလဲ ဆိုတော့….. ရောငျးတဲ့ကော ငျတှကေ. .ပွူးပွူးေ မှးမှေး မွှပှေေးဖွဈပွီးရော..ဖမျးရောငျး ကွ သလို မွှေ ပှဲစားကလဲ…ရသမြှ အကု နျသယျပွီး တရုတျပွညျ သှားပို့တယျ..။ အဲ ဒီမှာ..ဝယျလကျ တရု တျ က မကျြပွူးတှေ မဝယျဘူး လို့ပွောတော့ ..။
မွှပှေဲစား ဒုက်ခေ ရာကျပွီလေ….မှဲတော့ မှာ ကိုး.. အဲဒီမှာ..မွှပှေဲစားက အကွံပျေါ လာတာနဲ့ ကားထဲကွေ မှပှေးမကျြွ ပူးတှေ ကို..တဈ ကောငျခွငျးယူပွီး..မကျြလုံး မှာ ပရုပျဆီ လိ မျးပေး လိုကျ သတဲ့…ဘယျေ လာကျပွူး တဲ့ မကျြလုံးဖွ ဈနနေေ ပရုပျဆီ နဲ့တှတေ့ော့ မှေး သှား ရတာပဲ ..။တရုတျ ဝယျလ ကျ ဆီပွနျသှားပွီး .. ” ဟောဒီမှာ..တာကော လိုခငျြတဲ့ မကျြမှေး တှဆေို ပွီး ရောငျးတော့.. စောငျတရုတျက လဲ ဘုမသိဘမသိ နဲ့မွှပှေေး မကျြမှေးတှေ ဆိုပွီးငှခေပြေေး လိုကျတာပေါ့… ။
ရကျနညျးန ညျးကွာ လို့ ..ပရုတျဆီဓာတျ ပယျြသှား တဲ့မွှပှေေး တှေ ရဲ့ မကျြလုံးတှေ က…ပွူးပွူးလာ တိုငျး တရုတျ ရဲ့ မကျြလုံးပါ ပွူးပွူး လိုကျလာ သတဲ့…ငါဝယျတဲ့ မကျြေ မှးတှေ က..အခုဘာ လိွု့ပူးလာ သလဲ ဆိုပွီးစ ဉျးစားရငျး နဲ့ တရုတျ ကွီး ရရှေတျလိုကျ တာက တော… ” စောငျ ပ ယိုးးးး ဘီမာသှေ ” တဲ့ … မလုပျသေး လို့ပါနျော…မွနျမာတှေ … တီကယျ လိ မျရငျ..တီရုတျ လညျး မခံနို ငျ ပါဘူး နော့ …..